The Kpop Times - ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း SM အင်တာတိန်းမန့်ရဲ့အရောင်းရဆုံး အယ်လ်ဘမ် ၁၇ ချပ်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း SM အင်တာတိန်းမန့်ရဲ့အရောင်းရဆုံး အယ်လ်ဘမ် ၁၇ ချပ်
SM အင်တာတိန်းမန့်ဟာဆိုရင် K-Pop အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဉီးဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေထဲက ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။
EXO၊ NCT၊ Red Velvet၊ Girls’ Generation၊ SHINee နဲ့ Super Junior အဖွဲ့တွေလို အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပြင် အခြားသောအနုပညာရှင်တွေရှိနေတဲ့ ဒီကုမ္ပဏီဟာ အယ်လ်ဘမ်တွေများစွာရောင်းချနေရတာဟာ အံ့သြစရာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
Hanteo ဒေတာပေါ်အခြေခံထားတဲ့ SM အင်တာတိန်းမန့်ရဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအယ်လ်ဘမ် ၁၇ ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
17. Chocolate by MAX
MAX ရဲ့ ပွဲဉီးထွက်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်သီချင်းအမည်ကတော့ "Chocolate" ဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 85.1k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
16. Timeless by Super Junior
ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာဆိုရင် Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ နဝမမြောက် full-length အယ်လ်ဘမ် "Time_Slip" ရဲ့ repackage ဗားရှင်းဖစ်ပြီး ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “2YA2YAO!” လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစီးသီချင်းနဲ့အတူ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 85.4k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
15. What Do I Call You by Taeyeon
Taeyeon ရဲ့ လေးခုမြောက် မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ကာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 89.3k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ "Happy" ဖြစ်ပါတယ်။
14. Never Gonna Dance Again: Act2by Taemin
တတိယမြောက် full-length အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “IDEA:理想”လို့အမည်ပေးထားပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 110.3k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
13. When We Were Us by Super Junior-KRY
ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ Super Junior-KRY ရဲ့ ပထမဆုံးသော မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “When We Were Us”လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 129.8k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
12. Never Gonna Dance Again: Act 1 by Taemin
“Criminal” လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစီးသီချင်းပါဝင်တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာဆိုရင် တတိယမြောက် full-length အယ်လ်ဘမ်(ပထမပိုင်း) ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိခဲ့ကာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 135.4k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
11. Monster by Red Velvet’s Irene & Seulgi
Red Velet အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဉီးရဲ့ ဒီမီနီအယ်လ်ဘမ်ဟာဆိုရင် ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 181.0kရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Monster” ဖြစ်ပါတယ်။
10. Bad Blood by Super Junior-D&E
ခေါင်းစီးသီချင်းကို “B.A.D” လို့အမည်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ၃ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ကာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 191.7k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
9. Self-Portrait by Suho
EXO အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သလို အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဉီးလည်း ဖြစ်တဲ့ Suho ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ပွဲဉီးထွက် မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Let’s Love” ဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 252.2k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
8. KAI (开) by Kai
ဒီအယ်လ်ဘမ်ဟာဆိုရင်လည်း EXO အဖွဲ့ဝင် Kai ရဲ့ ပွဲဉီးထွက် မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ကာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 299.3k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Mmmh” ဖြစ်ပါတယ်။
7. Neo Zone: The Final Round by NCT 127
NCT 127ရဲ့ ဒုတိယမြောက် repackage အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Punch”ဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 351.5k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
6. Neo Zone by NCT 127
အဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယမြောက် full-length အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Kick It” ဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 463.8kရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံး full-length အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 486.5k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “1 Billion Views” ပါ။
4. Resonance Pt.2by NCT
ဒုတိယမြောက် full-length အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 562.3k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းတွေကတော့ “90’s Love” နဲ့ “Work It”တို့ဖြစ်ပါတယ်။
3. Reload by NCT Dream
စတုတ္ထမြောက် မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Ridin'”လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 564.4k ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
2. Resonance Pt.1 by NCT
ဒုတိယမြောက် full-length အယ်လ်ဘ
မ်ရဲ့ ပထမပိုင်းဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းတွေကတော့ “MakeaWish (Birthday Song)”နဲ့ “From Home”တို့ဖြစ်ပြီး ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 890.3kရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။
1. Delight by Baekhyun
Baekhyun ရဲ့ ဒုတိယမြောက် မီနီအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ပြီး မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ကာ ကော်ပီအချပ်ရေပေါင်း 926.6kရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ ခေါင်းစီးသီချင်းကတော့ “Candy”ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ် ၂၀ နီးပါးအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ကုမ္ပဏီအဆောက်အဦကို နေရာရွှေ့ပြောင်းရန် SM ပြင်ဆင်နေဟုဆို
SM အင်တာတိန်းမန့်ဟာ မကြာခင် အဆောက်အဦအသစ်တစ်ခုကို ရနိုင်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
aespa အဖွဲ့ရဲ့ 'Black Mamba' သီချင်းနဲ့ ပွဲဦးထွက်မယ့်ရက်ကို SM အတည်ပြု
aespa အဖွဲ့ဟာ သူတို့ပွဲဦးထွက်မယ့်ရက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ရဲ့ အရိပ်လွှမ်းမိုးမှုတွေကနေ မလွတ်နိုင်သေးတဲ့ Karina
SM အင်တာတိန်းမန့်ရဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုတော်အဖွဲ့သစ် aespa ဟာ နိုဝင်ဘာလမှာ ပွဲဦးထွက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
'aespa' မိန်းကလေးအဖွဲ့သစ်အကြောင်း SM ကြေညာ
SM အင်တာတိန်းမန့်ဟာ မကြာခင်မှာ မိန်းကလေးအဖွဲ့သစ်တစ်ခုကို စင်တင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Yoo Jimin ရဲ့ ကောလာဟလတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ SM
မကြာသေးခင်ကပဲ SMအင်တာတိန်းမန့်ရဲ့ သင်တန်းသူ ဖြစ်တဲ့ Yoo Jimin နဲ့ ကျောင်းအတူတက်ခဲ့တဲ့သူတွေလို့ ယူဆရတဲ့သူတွေက သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောလာဟလသတင်းတွေကို community site တွေပေါ်မှာ ဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။